Tsika dzechiArabhu | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | tsika nemagariro
Isu tinorarama mune nyika dzakasiyana uye ndezve izvo zvakasiyana zvinoita kuti tifarire kwazvo senge mhando. Nhasi tichaona iyo Tsika dzechiArabhu, tichifunga, asi panguva imwechete tichiedza kuti tibve pamufananidzo uyo vezvenhau vanowanzotipa nezvazvo.
Tsvaga, dzidza, kukoshesa, kuremekedza, aya ndiwo mazwi emashiripiti ehunhu hwakanaka kugarisana. Nhasi, zvadaro, tsika dzeArabhu dzichange dziri protagonist yechinyorwa chedu.
Kutanga iwe unofanirwa kunzwisisa izvo Tsika dzechiArabhu neIslam zvakabatana zvakanyanya. Sekureva kweWorld Bank, na2017, zvaifungidzirwa izvozvo huwandu hwepasi rose hwevaArabhu hwaive 414.5 miriyoni yakagovewa zvakanyanya munyika makumi maviri nemaviri ivo vari kuMiddle East neNorth Africa. Turkey neIran havasi muboka iri nekuti vanotaura chiTurkey kana Farsi.
Kunyangwe paine zvimwe zvitendero munzvimbo iyi Islam ndiyo chitendero chikuru, vangangoita 93% yevaMuslim uye maKristu anomiririra 4% munzvimbo imwechete iyi. Islam inotongwa neKorani, bhuku rinotendwa kuti rakaratidzwa kumuporofita Muhammad naMwari pachake kuburikidza nengirozi huru Gabrieri. Mutemo wechiIslam unozivikanwa seSharia uye chave chikamu chakakosha chebumbiro remitemo uye kunyangwe mitemo yenyika munyika zhinji.
Sharia, nzira, ndiyo hwaro hwehurongwa hwese hwehunhu hweArabhu. Iyo yakakamurwa kuita zvikamu zvishanu: kumisikidzwa kweruramisiro, dzidzo, ruzhinji nehunhu hunhu, kudzivirira kweumwe neumwe matambudziko munzanga, uye kudzivirira kweudzvanyiriri. Chokwadi ndechekuti nyika dzese dzeArabhu dzinodudzira chiIslam zvakasiyana, vamwe vachiomesa kupfuura vamwe kunyange kutorangwa nemutoro (kucheka maoko embavha, semuenzaniso).
VaMuslim vanonamata kashanu pazuva uye hupenyu hwese hwakarongedzwa kutenderedza iwo mashanu nguva. Vakadzi mumasikiti vanopfeka zvine mwero uye vanofukidza misoro yavo, munhu wese anobvisa shangu uye varume nevakadzi vanosara vakaparadzana. Munguva ye Ramadamu, mwedzi wepfumbamwe, mutsvene, maererano nekarenda yeMuslim, vanhu vanotsanya kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro.
Mutsika dzechiArabhu mhuri yakakosha uye neimwe nzira kubatana kwemadzinza kunochengetedzwa, pamwe nehukama hwemhuri. Chirevo "Ini nevanin'ina vangu tinopesana nevanin'ina vangu, hama dzangu neni pakurwisa mutorwa," chinovaratidza zvakanaka. Dzinza rakakosha zvakare. Ndiyo tsika yemadzitateguru umo murume anotarisira mhuri yake uye kana asingakwanise, zvinonyadzisa. Amai vane basa rechinyakare uye vanogara pamba, kurera vana, kutarisira imba.
Vana vanorerwa zvakasiyana, zvinoenderana nekuti ivo varume kana vakadzi. Vana vanongobva pamba kana varoora uye kazhinji mumwe chete wavo anogara pamba pevabereki vavo achivachengeta. A) Hongu, Tsika dzechiArabhu dzinoremekedza vakuru vayo. Vanobvunzwa pazvinhu zvakawanda, kunyangwe kana zvavanotaura zvisinga gamuchirwe. Masisitimu ehutano munyika idzi haana kujairika, saka vakadzi vadiki vanowanzovimba zvakanyanya naamai vavo kana vamwene mukurera vana vavo.
Tsika dzechiArabhu zvakare ane godo nekuvanzika kwake uye nyaya dzemhuri hadziwanzo kukurukurwa zvakapfava pamberi pe chero munhu. Kuvanzika uku kunodudzirwa mukuvakwa kwedzimba, uko kune nzvimbo dzinojairika dzinogashirwa vashanyi nenzvimbo dzavasingazombopinda.
Hukama huri sei pakati pemuArabu nemuenzi? Chinhu chinowanzoitika ndechekuti kana tikapinda mukamuri mune maArabu vanosimuka kuzotitambira. Vakadzi havabatwe, kunze kwekunge mukadzi wechiArabhu atanga atambanudza ruoko rwake, ivo havataurwe navo vasati vaunzwa kwauri, uye murume wechiArabhu haabvunzwe nezvemukadzi wake kana vanasikana.
Kuunza chipo, semune dzimwe tsika zhinji, ndicho chinhu chine hunhu zvakanyanya kuita. Usaramba kukokwa kunwa uye unofanira gara uchishandisa ruoko rwako rwerudyi kana uchidya, uchinwa kana kupfuura chikafu nekunwa. Chikafu chakakosha mutsika dzechiArabhu, kugovana chingwa, kudya hove negwayana.
Pane chimwe chinhu chakasiyana mu rokwe remaArabu? Chokwadi ndechekuti tsika dzinosiyana nyika nenyika, dzimwe nguva kune zvipfeko zvemunyika kana vakadzi vanofanirwa kushandisa iyo hijab kana a burqa achivanza muviri wake wese. Mune vamwe, zvipfeko zviri kuMadokero.
Chero chii zvacho, nguva dzose ndezvechokwadi kuvhara dzimwe nzvimbo nekuda kwekuzvininipisa: mapfudzi nemaoko. Izvo hazvireve kuti ivo vasikana vemazuvano, munyika dzazvino uno, havapfeke mashati mapfupi-maoko kana jini rakaonda. Asi, hongu, kana tichizoenda kune imwe nyika yeArabhu tinofanira kurongedza mbatya dzakadzikama.
Ichokwadi kuti inzvimbo dzinopisa uye imwe inongoda kupfeka zvikabudura asi kwakatenderedza pano mukadzi haapfeke rudzi urwu rwehembe, uye nekudaro, tichagamuchira kutarisisa kwakanyanya. Zvichida Dubai kana dzimwe nyika munzvimbo ino dzakasununguka, asi hatifanire kukanganwa zvakaita tsika dzechiArabhu.
Zvino, kupfuura hunhu hune tsika dzechiArabhu nhasi, uye zvakanyanya kudikanwa kana uchifamba, unofanirwa kuzviziva tsika dzeArab dzakapfuma chero kwaunotarisa. Iyo arabic mabhukue izere nefuma, zvimwe chete mumhanzi nekutamba uye kubva parusununguko, mune izvo zvaive nyika dzenyika dzeEurope, cinema. Kudzidza zvishoma kubva kwaari zvinogara zvakanaka, nekuti zvinotipfumisa.
Zvino, chokwadika, semukadzi pane nyaya zhinji dzandisingade. Zvizhinji nhasi, kuti munzvimbo zhinji dzenyika isu tiri kurwira kodzero dzedu mune yakadai nyika yemeso. Asi ndine tariro uye ndinoedza usave wakadaro.
Ini ndoda kufunga kuti tsika yakafanana nemutauro. Isu tese takakurirwa kusvika patiri isu vatakuri veimwe kana imwe tsika, uye chero bedzi iyo tsika iri mupenyu inogara ichichinja. Zvakafanana nerurimi. Nekudaro, nyika yepasi rose yatinogara iri kusundidzira idzo dzese tsika dzechivanhu kuti dzichinje. Ndinovimba vakadzi vanotsvaga shanduko dzakanaka munyika idzi vanozokwanisa kufambira mberi munzira yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » tsika nemagariro » Tsika dzechiArabhu
Lausanne, yakakosha muSwitzerland guta